2010 ~ The Light of Truth
ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်မှာ ခပ်လန်းလန်း ခရစ်စမတ်သီချင်းလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ
Friday, December 24, 2010 The Light Of Truth No comments
Sunday, November 14, 2010 The Light Of Truth No comments
ကျနော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အစ်ကိုဆိုလည်းဟုတ်၊ ဆရာဆိုလည်းဟုတ် တဲ့သူတစ်ယောက်ဆီက ကြားဖူးတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝဆိုတာ ယူသလောက်ရတာမဟုတ်ဘူး၊ ယုံသလောက်ရတာ …တဲ့။
တကယ့်ကိုမှတ်သားစရာစကားတစ်ခွန်းလို့ ကျနော့်နှလုံးသားထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံယူပြီး ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကျနော်တို့တွေဘယ်လိုရှုမြင်ခံယူသလဲ၊ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ လက်ခံယုံကြည်ထားသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့တွေရဲ့အသက်တာမှာ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ခမ်းနားမှုတွေကိုရယူနိုင်မှုချင်း ကွာခြားသွားကြတာပါပဲ။ ကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို သတင်းကောင်း - GOOD NEWS တနည်းအားဖြင့် GOSPEL လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကောင်းကို ဂရိဘာသာအားဖြင့် SOZO လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဥဿုံကယ်တင်ခြင်း (ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ဝိညာဉ် ကယ်တင်ခြင်း)လို့သက်ရောက်ပါတယ်။
ကဲ…. ဟုတ်ပြီ။ ဒီနေ့ ကျနော်တို့အသင်းတော်တွေ၊ ယုံကြည်သူတွေ အဲဒီလိုဥဿုံကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ဟောပြောကြရဲ့လား၊ သိကြရဲ့လားလို့ ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ကျနော်တို့သိတဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းက ဘာလဲ…. ကျနော်တို့အတွက် လောကကိုကြွလာတယ်။ အပြစ်သားတွေကို အသက်ကိုပေးပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်။ သူ့ကိုယုံကြည်ရင် ထာဝရအသက်ကိုရမယ်။ အဲဒီလောက်ပဲလား။ အဲဒီအသိတရားက မှားလားဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မပြည့်စုံဘူးဗျ။ အဲဒီယေရှုက မိတ်ဆွေတို့၊ ကျနော်တို့ ဆန်းဒေးစကူးမှာသိခဲ့တဲ့ ယေရှုလို့ပြောပါရစေ။ တကယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့အသိတရားထဲက ယေရှု၊ ကျနော်တို့ရဲ့နှလုံးသာထဲကယေရှုဟာ ရင့်ကျက်ကြီးထွားသင့်နေပါပြီ။ ကျမ်းစာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
ထိုကြောင့်၊ သေခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုနောင်တရခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၊ ဗတ္တိဇံ တရားကို သွန်သင်ခြင်း၊ လက်ကိုတင်ခြင်း၊ သေလွန်သောသူတို့၏ ထမြောက်ခြင်း၊ ထာဝရစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း တည်းဟူသော မူလအမြစ်ကို ငါတို့သည်ပြန်၍မတည်ဘဲ၊ ခရစ်တော်၏ဘာသာ၌ အစအဦးဖြစ်သော အကြောင်း အရာတို့ကို ထား၍၊ စုံလင်သောအဖြစ်သို့ တက်ကြကုန်အံ့။ ဟေဗြဲ ၆း ၁-၂
ဒီကျမ်းချက်မှာ ဘယ်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေတာလို့ မိတ်ဆွေထင်ပါသလဲ။တကယ်ဆိုဒီကျမ်းချက်က ဒီကနေ့အထိ စုံလင်တဲ့အဆင့်ကိုမတက်လှမ်းနိုင်သေးတဲ့ သူငယ်ပြန်ခရစ်ယာန်တွေကို ပြောနေတာပါ။ နောက်ထပ်ကျမ်းချက်တစ်ချက်လောက်ထပ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
သင်တို့သည် ကာလကြာသောကြောင့် ဆရာအဖြစ်သို့ ရောက်သင့်သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်၌ရှေ့ဦးစွာ သင်ရသောတရားနုတို့ကိုသူတပါးထံ၌ တဖန်သင်ရသော အကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ ကြေခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်၊ နို့ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏။ နို့ကိုသာ သုံးဆောင်သော သူမည်သည်ကား၊ သူငယ်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ လေ့လာခြင်းမရှိ။ ကောင်းကျိုး မကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍ သိနိုင်သောဥာဏ်ပေးတတ်သော၊ အကြားအမြင် အတွေ့အစမ်းများသော သူတည်းဟူသော၊ စုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကား၊ ကြေခဲသောအစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ရကြ၏။
ဟေဗြဲ ၅း ၁၂- ၁၄
ကျနော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာ ဆံဖြူ၊ သွားကျိုးအသက်တာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ​ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတော့ နို့ဗူးစို့နေကြဆဲ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အသင်းတော်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောလို့ သူများအသင်းတော်ကို ပုတ်ခတ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ယေရှုအကြောင်းကိုပဲ ပြောနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုရဲ့စံနှုန်းကိုပဲ ထုတ်ဖော်ပြီးခွန်အားယူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ယေရှုရဲ့စံနှုန်းနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေရင် ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အသိပေးနေတယ်လို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ကြပါခင်ဗျာ။ ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။
တကယ်တော့ သခင်ယေရှုဆိုတာ နုံချာစုတ်ပြတ်လှတဲ့ သူတော်စင်တစ်ယောက်၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေကို နောင်ဘဝအရေးကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ဟောပြောသွန်သင်ပြီး အခုဘဝကို ငတ်ပြတ်သေရင်လည်းသေပါလေ့စေဆိုပြီး လက်တွေ့မကျတဲ့ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တရားတွေကိုပဲ နင်းကန်ခွဟောနေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ သခင်ယေရှုရဲ့အမှုတော်မြတ်ကို မစခင်အချိန်မှာ ပထမဆုံးလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ကြေငြာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာမှာပြည့်ပြည့် စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇရပ်စောင့်သည် ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာကိုပေးသည် ဖြစ်၍၊ ကျမ်းစာကိုဖွင့်တော်မူလျှင် တွေ့သောအချက်စကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဆင်းရဲသားတို့အား ဝမ်းမြောက်စရာသိတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းငှါ ငါ့ကိုဘိသိက်ပေး တော်မူပြီ။ ကြေမွသော သူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဘမ်းသွားချုပ်ထားလျက်ရှိသော သူတို့အားလွှတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့် မျက်စိကန်းသောသူတို့အား မျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကို ပြစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကို ကယ်မစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကို ကြားပြောစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူပြီဟုလာတည်း။ ကျမ်းစာကိုလိပ်၍ ဇရပ်စောင့်အားပေးပြီးမှ ထိုင်တော်မူ၏။ ဇရပ်၍ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုစေ့စေ့ကြည့်လျက်နေကြ၏။ လုကာ ၄း ၁၇- ၂ဝ
ကဲ…. ဒီကျမ်းချက်ကနေပြီးတော့ သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် သူ့အကြောင်းကိုသူဟောပြောခဲ့တဲ့ သတင်းကောင်းမှာ ဘာအချက်တွေပါတယ်ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
(၁) ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် ငါ့အပေါ်မှာတည်တော်မူ၏။
အမှုတော်မြတ်နဲ့ ယုံကြည်သူတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံချင်ကြသလို ငြင်းပယ်ချင်ကြပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံလို့ ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် မပြည့်စုံဘူးဆိုတာကိုပဲ ကျနော်ကတော့ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသာလျှင် သင့်အပေါ်မှာ ဘယ်လိုဘိသိက်ခြင်းတွေတည်နေတယ်၊ ဘယ်လိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ တည်နေတယ် ဆိုတာကို အပြည့်အစုံ သိမြင်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံရင် ခင်ဗျားဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာရှိမှန်း မသိ၊ ဘာကောင်မှန်းမသိဘဲ အထီးလား၊ အမလားတောင် ခွဲတတ်တဲ့သူ မဟုတ်သေးပါဘူး။ တကယ်တမ်းဆိုရင် ကျနော်တို့စံထားတဲ့နှုတ်ကပတ်သမ္မာကျမ်းစာကို သေသေချာချာ လေ့လာကြည့်ရင်လည်း အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး(၃)ပါးစလုံးက သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲ ဖော်ပြပေးနေတာနဲ့ ထပ်တူ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းဏ္ဍကလည်း ကမ္ဘာဦးကျမ်းကနေစလို့ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအဆုံး ပါဝင်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ ၁း ၂။ ဗျာဒိတ် ၁း ၁ဝ။
ကဲ….. ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ တမန်တော်ကြီးပေါလုက ဘယ်လိုရေးသားဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
သို့သော်လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းစေတော်မူသော နှစ်သက်ဘွယ်ရာ ပူဇော်သက္ကာတည်းဟူသော တပါးအမျိုးတို့ကို ပူဇော်ခြင်းငှါ ငါသည်ဘုရားသခင်၏ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောသောအမှုကို ဆောင်ရွက်၍၊ တပါးအမျိုးသားတို့တွင် ယေရှုခရစ်၏ အမှုဆောင်ဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် ငါ၌အပ်ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကို ငါအမှီပြု၍၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့ကိုသတိပေးလျက် သာ၍ ရဲရင့်စွာ ရေးလိုက်ပါ၏။ ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင် သောအရာတို့၌ ငါသည် ယေရှုခရစ်ကို အမှီပြု၍ ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏။ တပါးအမျိုးသားတို့သည် စကားအားဖြင့်၎င်း၊ အကျင့် အားဖြင့်၎င်း၊ နားထောင်စေခြင်းငှါ၊ ခရစ်တော်သည် နိမိတ်လက္ခဏာ၊ အံ့ဘွယ်သော အမှုများ၌ပါသောတန်ခိုး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးကိုပြ၍၊ ငါ့အားဖြင့် ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုသာ ငါပြောဝံ့၏။
ရောမ ၁၅း ၁၅- ၁၉
(မှတ်ချက်) ၁၄.၁၁.၂၀၁၀ နေ့ရက်မှ တရားဟောချက်ကို ကောက်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Sunday, November 07, 2010 The Light Of Truth No comments